4 Hab Oo Aad Kula Tacaali Karto Isagana Ridi karto Miisaanka Culus Ee Jidhka - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle 4 Hab Oo Aad Kula Tacaali Karto Isagana Ridi karto Miisaanka Culus...
Haddii aad ka mid tahay dadka Miisaanka jidhkoodu dhibta ku hayo jecelna in uu dhimo culayska saaran waxa la gudboon in ay raacaan haddiiba ay awoodaan tallaabooyinkan afarta ah oo la ogaaday in ay si weyn u caawiyaan la dagaalanka baruurta iyo miisaanka badan gaar ahaan Xaydhka ku ururta Caloosha, Badhyaha iyo guud ahaan Jidhka. Gaar ahaan haween badani waxa ay dhib ka sheegtaan marka ay Ubad dhalaan kadib in ay Naaxaan oo Baruur badani Calooshooda Fuusho si aad hadaba taasi uga takhalusto waxa kula gudboon in aan tilmaamahan u dhug yeelto kuwaasi oo ah:
1-Qaado 3-5 Koob oo shaaha Cagaaran ah oo Sonkortu ku yar tahay qaado si Maalinle ah. Waxa aad tallaabadan caado ka dhigataa Muddo Todobad ah oo aan kala Go’ lahayn. Waxa aad arki doontaa sida Jidhkaagu u gubay Baruurta 43%.
2-La Dagaalanka Caloosha iyo Gubista Dufanka Jidhka ku jira: waxa aad soo qaadataa Koob Biyo ah. Waxa aad ku dartaa Malqaacad Shaah Cagaaran ah. Waxa aad ku dartaa oo kale Malqaacad Khamuun ah (Geedka Khamuunta), Malqaacad Sinjibiil ah, intaa oo aad isku walaaqday waxa aad saartaa Dabka Muddo 10 daqiqadood ah. Saddex jeer maalintii qaado cuntooyinka ka hor muddo nususaace ah. 15 Maalmood sidaa ku wada waxaad arki doontaa Idamka Alle is badal weyn oo kugu yimid.
3- Casiirka Cananiska: Haddii aad Heli karto Casiirka laga miiray Furuutka Cananiska. Waxa aad soo qaadataa Koob Casiir ah oo laga tuujiya Geedka Cananiska adiga oo aan wax Sonkor ah taabsiin. Muddo 15 Maalmood ah waxaad qaadataa Cuntada ka hor adiga oo raacinaya Jimicsiyo Fudud iyo Nidaam Cunto oo dheelli tiran oo ay ku yar yihiin Carbohadret iyo Fats waxaad ogaan doontaa in wax weyni kuu kordheen oo aan lumisay miisaan badan.
4- Casiirka Liin Dhanaanta oo lagu badhxay Sinjibiil: waxaad soo qaadataa Laba xabbadood oo Liin Dhanaan ah kadibna Miir. Waxa aad ku dartaa Koob Biyo nadiif ah. Waxa aad raaacisaa oo aad ku badahxdaa oo kale Malqaacad Sinjibiil ridqan ah. Dabka saar adiga oo Baylinaya. Marka ay qaboobaan waxaad cabtaa Habeenkii Hurdada uun marka aad dhinaca
Dhulka dhigayso. Waxa kale oo aad cabtaa subaxdii marka aad soo toosto adiga oo aan wax kale afka gelin. Sidaa ku wada mudd laba Usbuuc ah waxa aad arki doontaa Baruurtii Caloosha oo kaaa dhacday Insha Allaahu. Adooku dadaalaya hababkan.
Qiso layaab Leh: Nin Masiixi Ah Oo Dadka Muslimiinta Ah Suxuurta U Toosinaya Sannadkii 14aad Oo Xidhiidh Ah Iyo Ujeedada Uu Ka Leeyahay